အမရေိကနျမှာ မဲရတှေကျတာ ဘာလို့ ကွာနတောလဲ? – Let Pan Daily
အမရေိကနျမှာ မဲရတှေကျတာ ဘာလို့ ကွာနတောလဲ?
Let Pan | November 7, 2020 | World News | No Comments
Joe Biden နဲ့ Trump ဘယျသူနိုငျသလဲရလဒျကို ပွတျပွတျသားသား မကွညောနိုငျတာ ၃ ရကျရှိပါပွီ။ ပွညျနယျအခြို့မှာ မွနျမွနျနီ၊ တဈခြို့မှာ မွနျမွနျပွာပွီး လူတှသေိခငျြတဲ့ပွညျနယျတှကေမြှ အရောငျနုတှကေနေ အရောငျရငျ့မလာတော့ဘူး။
Biden က 264 – Trump က 214 နဲ့ တကျမလာတော့ပဲ ဝမျးခြုပျပွီး တဈသလိုတဈနတော ၃ ရကျလောကျရှိတော့နမေထိထိုငျမသာအတျောဖွဈရပါတယျ။အမရေိကနျရှေးကောကျပှဲနဟေ့ာ နိုဝငျဘာလ ၃ ရကျနဖွေ့ဈပါတယျ။ သို့သျောအဲ့ဒီနမှေ့ာအပွီးရတှေကျပွီးရလဒျကိုကွညောရမယျလို့ မဟုတျပါဘူး။ပွဿနာကပွညျနယျတဈခုနဲ့တဈခု #အဝေးရောကျမဲလကျခံရကျမတူကွတာဖွဈပါတယျ။ အဝေးရောကျမဲတှနေဲ့ စာတိုကျကမဲပေးကွတာကလညျး အကွောငျးရှိပါတယျ။ ပွညျပရောကျနသေူတှေ၊ စဈတပျထဲကလူတှေ၊ ကိုဗဈကိုကွောကျလို့လူကိုယျတိုငျရှေးကောကျပှဲနမှေ့ာ မဲရောမပေးခငျြသူတှကေ စာတိုကျကနမေဲပို့ပေးလို့ရပါတယျ။
absentee ballots လို့ချေါပါတယျ။ လူကိုယျတိုငျမလာရောကျနိုငျသူတှရေဲ့မဲတှပေေါ့။အမရေိကနျက မဲပေးသူ သနျး 160 မှာ 65.2 သနျးက စာတိုကျကနမေဲပေးခဲ့ပါသတဲ့။California မှာ အင်ျဂါနေ့ ရှေးကောကျပှဲနမှေ့ာ သတငျးဌာနတှကေ မွနျမွနျကွညောပွီး အပွာရောငျပွလိုကျပါတယျ။ အဲ့ဒါအကွမျးဖငျြးပဲမှနျပွီး #တရားဝငျရလဒျမဟုတျ သေးပါ။ California ကိုပွနျကွညျ့ရငျ 66% ပဲရတှေကျလို့ပွီးပါသေးတယျ။ မဲတှထေပျရတှေကျဖို့ကနျြနပေါသေးတယျ။သို့သျော မဲအရအေတှကျက ကှာလှနျးတော့သိသာတယျပေါ့။ မဲမကှာတဲ့ပွညျနယျတှကေတြော့ နောကျဆုံးမဲတဈမဲအထိအသအေခြာရတှေကျရပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ Google ခေါကျလိုကျရငျ Biden က 264 – Trump က 214 နဲ့တဈနရေတာပါ။ သိပွီလား။North Carolina မှာ ဥပဒအေရ နိုဝငျဘာလ ၁၂ ရကျနအေ့ထိရောကျလာတဲ့မဲကို ရတှေကျပေးရပါတယျ။Nevada မှာဆိုရငျ မဲဟာ နိုဝငျဘာ ၃ ရကျ ရှေးကောကျပှဲနေ့ စာတိုကျလကျခံတံဆိပျတုံးပါပွီး နိုဝငျဘာလ ၁၀ ရကျနရေ့ောကျလာရငျ ထညျ့ရတှေကျပေးရပါတယျ။
Wisconsin မှာ ရှေးကောကျပှဲနမှေ့ာ တဈခြိနျလုံးနီနရောက ညပိုငျးမှကပျပွာသှားပွီး Biden နိုငျသှားပါတယျ။ အဲ့ဒါကတြော့အတညျဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီပွညျနယျမှာ Supreme Court က ရှေးကောကျပှဲနမှေ့ာရတဲ့မဲသာလြှငျ ထညျ့သှငျးရတှေကျလို့ပါ။ Pennsylvania ပွညျနယျမှာ ရီပါဘလဈကငျကဦးဆောငျတဲ့ ဥပဒပွေုသူတှကေ ရှေးကောကျပှဲရကျမတိုငျခငျ ရှေးကျောကို ကွိုတငျမရတှေကျဖို့တားမွဈထားပါတယျ။Pennsylvania မှာ Trump ကမျပိနျးအဖှဲ့က မဲရတှေကျတာရပျတနျ့ဖို့ Supreme Court ကိုတောငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒီမှာ ရီပါဘလဈကငျတှကေ ရှေးကောကျပှဲနနေ့ောကျဆုံးထားပွီး စာတိုကျတံဆိပျတုံးပါဖို့ သောကွာနနေ့ောကျဆုံးထားရောကျဖို့ လနဲ့ခြီတောငျးဆိုခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒီတော့ အရမျးကိုမဲအရအေတှကျကပျနတေဲ့ အကွိတျအနယျပွညျနယျတှမှော စာတိုကျမဲတှကေို ပွညျနယျဥပဒကေလကျခံသ၍ နောကျဆုံးရကျအထိလကျခံရတှေကျရတာမို့ အခုထိတဈဆို့ဆို့ဖွဈနတောဖွဈပါကွောငျး။
CRD – Richard Myo Thant
Joe Biden နဲ့ Trump ဘယ်သူနိုင်သလဲရလဒ်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား မကြေညာနိုင်တာ ၃ ရက်ရှိပါပြီ။ ပြည်နယ်အချို့မှာ မြန်မြန်နီ၊ တစ်ချို့မှာ မြန်မြန်ပြာပြီး လူတွေသိချင်တဲ့ပြည်နယ်တွေကျမှ အရောင်နုတွေကနေ အရောင်ရင့်မလာတော့ဘူး။
Biden က 264 – Trump က 214 နဲ့ တက်မလာတော့ပဲ ဝမ်းချုပ်ပြီး တစ်သလိုတစ်နေတာ ၃ ရက်လောက်ရှိတော့နေမထိထိုင်မသာအတော်ဖြစ်ရပါတယ်။အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲနေ့ဟာ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အဲ့ဒီနေ့မှာအပြီးရေတွက်ပြီးရလဒ်ကိုကြေညာရမယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ပြဿနာကပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု #အဝေးရောက်မဲလက်ခံရက်မတူကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဝေးရောက်မဲတွေနဲ့ စာတိုက်ကမဲပေးကြတာကလည်း အကြောင်းရှိပါတယ်။ ပြည်ပရောက်နေသူတွေ၊ စစ်တပ်ထဲကလူတွေ၊ ကိုဗစ်ကိုကြောက်လို့လူကိုယ်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ မဲရောမပေးချင်သူတွေက စာတိုက်ကနေမဲပို့ပေးလို့ရပါတယ်။
absentee ballots လို့ခေါ်ပါတယ်။ လူကိုယ်တိုင်မလာရောက်နိုင်သူတွေရဲ့မဲတွေပေါ့။အမေရိကန်က မဲပေးသူ သန်း 160 မှာ 65.2 သန်းက စာတိုက်ကနေမဲပေးခဲ့ပါသတဲ့။California မှာ အင်္ဂါနေ့ ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ သတင်းဌာနတွေက မြန်မြန်ကြေညာပြီး အပြာရောင်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါအကြမ်းဖျင်းပဲမှန်ပြီး #တရားဝင်ရလဒ်မဟုတ် သေးပါ။ California ကိုပြန်ကြည့်ရင် 66% ပဲရေတွက်လို့ပြီးပါသေးတယ်။ မဲတွေထပ်ရေတွက်ဖို့ကျန်နေပါသေးတယ်။သို့သော် မဲအရေအတွက်က ကွာလွန်းတော့သိသာတယ်ပေါ့။ မဲမကွာတဲ့ပြည်နယ်တွေကျတော့ နောက်ဆုံးမဲတစ်မဲအထိအသေအချာရေတွက်ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် Google ခေါက်လိုက်ရင် Biden က 264 – Trump က 214 နဲ့တစ်နေရတာပါ။ သိပြီလား။North Carolina မှာ ဥပဒေအရ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့အထိရောက်လာတဲ့မဲကို ရေတွက်ပေးရပါတယ်။Nevada မှာဆိုရင် မဲဟာ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် ရွေးကောက်ပွဲနေ့ စာတိုက်လက်ခံတံဆိပ်တုံးပါပြီး နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ရောက်လာရင် ထည့်ရေတွက်ပေးရပါတယ်။
Wisconsin မှာ ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ တစ်ချိန်လုံးနီနေရာက ညပိုင်းမှကပ်ပြာသွားပြီး Biden နိုင်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒါကျတော့အတည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီပြည်နယ်မှာ Supreme Court က ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာရတဲ့မဲသာလျှင် ထည့်သွင်းရေတွက်လို့ပါ။ Pennsylvania ပြည်နယ်မှာ ရီပါဘလစ်ကင်ကဦးဆောင်တဲ့ ဥပဒေပြုသူတွေက ရွေးကောက်ပွဲရက်မတိုင်ခင် ရွေးကော်ကို ကြိုတင်မရေတွက်ဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။Pennsylvania မှာ Trump ကမ်ပိန်းအဖွဲ့က မဲရေတွက်တာရပ်တန့်ဖို့ Supreme Court ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ ရီပါဘလစ်ကင်တွေက ရွေးကောက်ပွဲနေ့နောက်ဆုံးထားပြီး စာတိုက်တံဆိပ်တုံးပါဖို့ သောကြာနေ့နောက်ဆုံးထားရောက်ဖို့ လနဲ့ချီတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒီတော့ အရမ်းကိုမဲအရေအတွက်ကပ်နေတဲ့ အကြိတ်အနယ်ပြည်နယ်တွေမှာ စာတိုက်မဲတွေကို ပြည်နယ်ဥပဒေကလက်ခံသ၍ နောက်ဆုံးရက်အထိလက်ခံရေတွက်ရတာမို့ အခုထိတစ်ဆို့ဆို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါကြောင်း။
မြန်မာ့ သံယံဇာ တ ကျိန်စာမိနေသော ရှီနဂါး နဲ့ ကြည့်ကောင်းေ တာ့မယ့် ပွဲ
လုံးဝ နောက်ဆုတ် လို့မရတဲ့ အမေရိကန်နှင့် တရုတ် တို့စစ်ပွဲ အတွက် နီးသထက် အနီးဆုံး အချိန်ရောက်ပီ